Isango lamaphupha akho e-Okanagan! - I-Airbnb
Isango lamaphupha akho e-Okanagan!
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguCalvin
Wamkelekile kwi-suite yakho yabucala kunye ne-cosy master kwi-Coldstream ethandekayo! Ibekwe kwindawo ezolileyo esembindini weempawu ezininzi zasekhaya, ichibi elihle laseKalamalka kunye nepaki yephondo, kunye nomzila kaloliwe waseOkanagan! Ibucala kwindlu enkulu enezixhobo ezisisiseko kuphela, akukho khitshi okanye impahla.
*Uhlaziyo lwe-COVID-19. Igumbi lihlala licocwa phakathi kweendwendwe kodwa kuya kubakho imigqaliselo eyongezelelweyo ethathiweyo ukucoca igumbi.
Le yi-master suite yakho yabucala enesango lakho lokungena ngasemva kweyadi. Ibhafu epheleleyo yesiqhekeza esi-4 ukuze uhlaziye kwaye uhambe kwikhabhathi ukuze ukhulule kwaye uzive ngathi usekhaya. Relax ngokuhlwa okanye ngekofu yakho yasekuseni kwidesika ngaphandle komnyango wakho. Umgangatho wesibini ecaleni kwekhaya unesofa yangaphandle kunye nomgodi womlilo wepropane. Kukho iimbono zeentaba ezingqongileyo kunye nembono ye-peekaboo yechibi elihle laseKalamalka! Kukho ikhitshi yesitayela sehotele kubandakanya ifriji, i-microwave, umenzi wekofu, i-toaster, kunye nezinye izinto eziyimfuneko (i-bottle opener yewayini yakho!) Igumbi lineemfama ezigcweleyo ezimnyama ezibandakanya kwisango lokungena lesiFrentshi. Iyadi inengca yokuhamba kuyo kunye nezibane ezishukumayo zokukukhokela ebusuku. Igumbi lijonge ngasemva kwendlu kwaye lizolile kwaye linoxolo! Kumgama wokuhamba ukuya kwi-pub, ivenkile yotywala, ivenkile eluncedo/ivenkile yekofu. Kunye nebhodi yokubheqa, i-kayak kunye nokurenta ibhayisekile ngexesha lasehlotyeni kunye nemizuzu elishumi kuphela yokuqhuba ukuya edolophini yaseVernon!
4.75 · Izimvo eziyi-73
Le yindawo ezolileyo yasezilalini kwindawo engaphandle kweVernon B.C. Kukuhamba umgama ukuya kwipaki yeKalamalka, echibini leKalamalka, iilwandle, uloliwe ukuya kumzila, i-pub, ivenkile yotywala, ivenkile yekofu, i-SUP kunye nerenti ye-kayak (ixesha lonyaka). Kufuphi neendawo ezininzi zegalufa ezibandakanya iPredator Ridge kunye neRise. Imizuzu engama-30 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseKelowna, iSilverstar yimizuzu engama-35 kunye nemizuzu eli-10 ukusuka edolophini yaseVernon ngokutya okumnandi!
Umbuki zindwendwe ngu- Calvin
Ndinokubakho okanye ndingabikho apha ngexesha lokuhlala kwakho, ungalibazisi ukunxibelelana nam nangaliphi na ixesha!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Coldstream